Warar dheeraad ah oo kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay Qarax ka dhacay Muqdisho. – Banaadir Times
By banaadir 28th November 2020 139 No comment
Inta la xaqiijiyay 8-qof oo dhalinyaro ah ayaa ku dhimatay qaraxa, halka ay dhaawacmeen 10-ruux oo la geeyay Goobaha Caafimaadka si loo daweeyo, sida Mustaqbal ay xaqiijiyeen ilo xog ogaal.
Ra’iisul Wasaaraha XFS Maxamed Xuseen Rooble ayaa tacsiyeen kadib shacabka ka dalbaday in ay u midoobaan la dagaalanka Al-Shabaab, qorshaha kaliya wax looga qaban karo qaraxyada ayuu ku sifeeyay in ay tahay iskaashi.
“Waxaan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa ehelada dadkii ku dhintay qaraxii argagixisadu caawa la beegsadeen maqaaxi ay dad shacab ahi ku sugnaayeen magaalada Muqdisho. Eebbe ha u naxariisto intii dhimatay, dhaawacyadana Allaha bogsiiyo. Waa in aan u midownaa la dagaallanka argagixisada si aan dalkeenna iyo dadkeenna uga badbaadinno” Sidaasi waxaa yiri Ra’iisul Wasaare Rooble.
Xildhibaanada cusub ee Koonfur Galbeed oo la dhaarinayo.